डा. केसीको १६ औँ अनसन– चिकित्सा विधेयक र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको साइनो के ? – Taza Post
डा. केसीको १६ औँ अनसन– चिकित्सा विधेयक र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको साइनो के ?
चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै डा. गोविन्द केसी इलाममा पुगेर १६ औँ अनसन बसिरहेका छन् ।
गत साउन १० मा सरकारसँग भएको सहमतिविपरीत राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक गत बुधबार संसदीय समितिले पारित गरेपछि डा. केसीले ६ बुँदे मागसहित आफ्नो अनसन सुरु गरेका थिए ।
उनको यो अनशनमा विगत जस्तो चिकित्सा क्षेत्रका मुद्दा मात्र समेटिएका छैनन् द्वन्द्वकालीन मुद्दासमेत उठान गरेका छन् ।
डा. केसीको १६औँ अनसनका मागमध्य पाँचौँ बुँदामा भनिएको छ, ‘द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दण्डित गरियोस् । द्वन्द्वपीडितहरूको माग सुनुवाइ गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुङ्गोमा पुर्याइयोस् ।’
चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि लड्दै आएका डा. केसीले यो अनशनमा एकाएक द्वन्द्वकालीन मुद्दा उठान गर्नु पछाडिको रहस्य के ? त्यसो भए किन उनले विगतका अनसनमा यो मुद्दालाई उठान गरेनन् ? पछिल्लो समय बहसको विषय बनेको छ ।
यो बहसको विषय बनिरहँदा सत्तारुढ पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य योगेश भट्टराई यो विषयमा बोलेका छन् ।
शनिबार केही पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेता भट्टराईले चिकित्सा विधेयकबारे डा. केसीका सबै माग सम्बोधन हुँदा पनि पछिल्लो अनसन द्वन्द्वकालका घटनालाई संलग्न गरेर आफ्नो अनसनलाई हलुका बनाएको बताए ।
नेता भट्टराईले द्वन्द्वकालका मुद्दा उचाल्ने षड्यन्त्रमा डा. केसीको अनशनलाई प्रयोग गरिएको बताए ।
‘चिकित्सा शिक्षा विधेयकको नाममा डा. गोविन्द केसीले गरिरहेको अनसनबाट द्वन्द्वकालका घटना उचाल्ने प्रयास भएको देखिन्छ । यदि त्यस्तो षड्यन्त्र हो भने डा. केसी कुनै राजनीतिक दलको इसारामा अनसन बसिरहेका छन्, नेता भट्टराईले भने, ‘द्वन्द्वकालका मुद्दा सल्ट्याउने भनेर नै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनेको छ । त्यसले काम गरिरहेको छ । यो विषय आफ्नो अनसनका मागमा राखेर डा. केसीले दिन खोजेको सन्देश के हो ? कसको इसारामा यो षड्यन्त्र हुँदैछ ? सबै जनताले यो बुझ्नु पर्छ ।’
उनले पछिल्लो समय डा केसीलाई प्रयोग गरेर सरकारलाई बदनाम गराउन खोजिएको बताए ।
कुनै एक व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर राष्ट्रपति, सरकार, संसद, अदालत, प्रहरीलाई बदनाम गराउन खोजिएको भन्दै नेता भट्टराईले गोविन्द केसी इलाममा अनसन बसिरहँदा गङ्गामाया अधिकारीलाई पुल्चोकको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भवनअघि राखेर फोटो खिचाइएको समेत बताए ।
‘दुवै काम एकै पटक भइरहेका छन् । यी दुई कामको तारतम्य कहीँन कहीँ छ । यो संयोग हुन सक्दैन । यस विषयमा पार्टी र सरकार गम्भीर बनेर यसको गुदी पत्ता लागाउने समय आएको छ, नेता भट्टराईले भने, ‘कहिलेकाहीँ सादुकै भेषमा डरलाग्दा अपराध हुने गरेका पनि छन् । मैले सीधै डा. केसीलाई यो आरोप लगाउँदिनँ । तर सेतो लुगाभित्र दाग लाग्छ भन्ने समाजले विस्तारै बुझ्न थालेको छ ।’
डा. केसीका जाजय माग सम्बोधन भएका छन्
नेता भट्टराईले डा. केसीका जायज माग विधेयकमार्फत सम्बोधन भएको बताए ।
‘पछिल्लो समय नाजायज माग लिएर डा. केसी अनसन बसेका छन् । द्वन्द्वकालका मुद्दा उठाएर सरकार र हामीमाथि आक्रमण सुरु गरेको देखिन्छ । उनका जायज माग त सम्बोधन भइसकेका छन् नि ।’
उनले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले भैरवबहादुर सिंहको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय उपसमिति बनाएको र त्यस उपसमितिले २६ वटा बैठक बसेको बताए ।
‘अरू समितिमा यति धेरै बैठक भएनन् तर उपसमितिको २६ पटक बैठक बसेको छ । त्योे बैठकमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय, मेडिकल, नर्सिङ काउन्सिल तथा अन्य चिकित्सा क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेका थियौँ, नेता भट्टराईले भने, ‘केदारभक्त माथेमासहित अन्य कार्यदलका कार्यदलका सबै सदस्यलाई बोलाएर छलफल पनि गरेका थियौँ । त्यो छलफलमा डा. केसीका मागमा पक्ष विपक्षमा कुराहरू आएका थिए ।’
त्यस्तै उनले बैठकमा आएका सबै विषय समेटेर उपसमितिले केही दिनअघि समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै त्यहाँ सहमति जुट्न नसकेपछि संसदीय प्रक्रियाअन्तर्गत मतदानसमेत भएको बताए ।
‘समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यहाँ सहमति हुन सकेन । हामी भोटिङमा गयौँ । जहाँ १८ जनामध्ये १४ जनाले प्रतिवेदनको पक्षमा र ४ जनाले विपक्षमा भोटिङ भयो । मतदानको दिन नेपाली काँग्रेसका केही साथीहरू उपस्थित हुनुभएन ।’
लोकतन्त्रप्रतिको चिन्ता डा. केसीलाई भन्दा हामीलाई बढी छ
नेता भट्टराईले डा. केसी राम्रो चिकित्सक भएको भन्दैमा उनले उठाएका सबै कुरा जायज नहुन पनि सक्ने बताए ।
नेता भट्टराईले डा. केसीको संलग्नता लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नभएको भन्दै लोकतन्त्रको चिन्ता धेरै नर्गन आग्रह गरे ।
‘तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका विरुद्ध आन्दोलन गर्दा पार्टीका नामबाट कोही आउन तयार भएनन् । हामीले पछि जुक्ति लगाएर नागरिक समाजका नामबाट आन्दोलनमा उत्रियौँ । त्यसपछि सबै मान्छे सडकमा आए, नेता भट्टराईले भने, ‘खोई त्यतिबेला मैले कतै डा. केसीलाई देखिनँ । अरू कसैले देखेको भए भन्नु होला । त्यसकारण लोकतन्त्रको चिन्ता उहाँलाई भन्दा हामीलाई छ ।’
‘इलाम पुगेर उहाँले प्रचण्ड, ओलीलाई जथाभावी गाली गर्नुभयो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी नभएको व्यक्तिले आन्दोलनमा लागेका नेतामाथि त्यसरी प्रश्न उठाउने अधिकार उहाँले कहाँबाट पाउनुभयो ?’ नेता भट्टराईले थप प्रश्न गरे, ‘के उहाँ विपक्षी दलको नेता हो ? चिकित्सा विधेयक र द्वन्द्वकालका मुद्दाको साइनो के छ ?’(source)
Previous नयाँ मर्यादाक्रम सार्वजनिक, कसको स्थान कहाँ ? (सूचीसहित)
Next सरकारी कर्मचारीले पेन्सन पाउन अब आफूले पनि रकम जम्मा गर्नुपर्नेः कति काटिन्छ? कसरी पाइन्छ?